(London) 05 Maarso 2021. Maamulka kooxda Arsenal ayaa u jeedkoodu yahay inay xoojiyaan safka kooxdooda, gaar ahaan dhanka daafaca inta lagu gudi jiro suuqa xagaaga ee soo socda.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska “Daily Mail” ee dalka England, Arsenal ayaa xiiseyneysa inay la saxiixato daafaca reer France iyo kooxda RB Leipzig ee Ibrahima Konaté.
Ibrahima Konaté ayaa qandaraaska uu ku joogo kooxda RB Leipzig wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan, waxaana xusid mudan in Liverpool ay ka mid tahay kooxaha xiisaynaya adeega daafaca da’ada yar ee reer France.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta uu horey u xaqiijiyay in Gunners ay qorsheeneyso suuqa kala iibsiga oo aan horey loo arag, iyadoo ujeedka uu yahay inay ku laabtaan si ay ugu tartamaan koobab.
Si kastaba ha ahaatee, Ibrahima Konaté oo 21 jir ah ayaa u ciyaaray kooxdiisa RB Leipzig 88 kulan, wuxuuna u dhaliyay 4 gool, isagoo sidoo kale caawiyay 1 gool.